VaMakoni Vokonzeresa Kugedageda Kwemeno muZanu PF
Ndira 16, 2008
Zvinhu zvinonzi zvaita manyama amire nerongo muZanu PF pamwe nemuhurumende mushure mekubuda kwerunyerekupe rwekuti vakadzingwa basa segurukota rezvemari, Doctor Simba Makoni, vari kuda kuumba bato idzva nevamwe vavo vari muZanu PF pamwe nemumamwe mapato ezve matongerwo enyika.
Zvinonzi nyaya iyi yakapawo kuti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vadzoke kuzororo ravo nechimbichimbi neChipiri kuitira kuti vagadzirise bato ravo iro rinonzi rapindwa napongwe.
Vamwe vari kunzi vari kushanda naVaMakoni vanosanganisira vanhu vakawanda vekuchikwata chaVaSolomon Mujuru, vakuru vemauto, mapurisa uye vasori.
Vari kutsigirazve VaMakoni zviri pachena vanosanganisira Doctor Ibbo Mandaza, avo vakadzingwa basa semupepeti mukuru weMirror Group of Newspapers. VaMandaza vaudza Studio 7 kuti vachaparura bato ravo mumazuva mashoma anotevera.
Vamwe vari kunziwo varimo mubato idzva iri, ndiProfessor Jonathan Moyo, avo vakadzingwawo basa naVaMugabe segurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, VaNkosana Moyo, avo vakatiza munyika vari gurukota rezvekutengeserana, pamwe naVaDumiso Dabengwa, avo vasina chinzvimbo muhurumende pari zvino.
Hatina kukwanisa kunzwa divi raDoctor Makoni, VaMoyo pamwe naVaDabengwa. Zvinonzi muZanu-PF maitawo zinyekenyeke sezvo vakawanda vave kunangana huroyi.
Professor John Makumbe inyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Professor Makumbe vaudza mutori wenhau weStudio7, Blessing Zulu, kuti kutadza kutonga kwaVaMugabe kwave kupa kuti vakawanda vade kubuda muZanu-PF.